Semalt विशेषज्ञ Scrap का शीर्ष6प्रमुख लाभहरु परिभाषित गर्दछ
Scrap नि: शुल्क र खुला स्रोत डेटा स्क्र्यापर हो। यो पाइथन-आधारित प्रोग्राम विकासकर्ताहरू, गैर-कोडरहरू, डाटा विश्लेषकहरू, अन्वेषकहरू, र स्वतन्त्रकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ। तपाईं डाटा निकाल्न र आफ्नो वेब पृष्ठहरू व्यवस्थित गर्न Scrap प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो उपकरणले विशिष्ट API हरूको साथ यसको कार्यहरू गर्दछ र एक शक्तिशाली वेब क्रलरको रूपमा कार्य गर्दछ। Scrap एक बेहतर तरिका मा तपाइँको वेब पृष्ठहरु सूचकांक मद्दत गर्दछ। यो रूपरेखा Scrapinghub लिमिटेड द्वारा बनाए र स्वामित्वमा छ
१.अद्वितीय बट्स र माकुरा:
Scrap स्वत: निहित बट्स, माकुरा, र क्रॉलर वरिपरि निर्मित छ। तिनीहरूलाई विशेष निर्देशन दिइन्छ। यी बट्स र क्रलरहरू तपाईंको वेब पृष्ठहरू सजिलैसँग रक्रल गर्नुहोस्। तिनीहरूले आफ्नो कार्य छिटो गतिमा प्रदर्शन गर्दछन् र तपाईंलाई सटीक र विश्वसनीय परिणाम दिन्छन्। Scrap व्यापक मकड़ियों यो तपाईं को लागी निर्माण गर्न र तपाईंको वेब सामग्री को मापन गर्न को लागी सजिलो। तपाईंले कुनै प्रोग्रामिंग भाषा सिक्नुपर्दैन, किनकि तपाई आफ्नो साइट वा ब्लगको व्यवहार जाँच गर्न Scrap प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
Scrap लाइस्ट, Sayone टेक्नोलोजीहरू, Parse.ly, CareerBuilder, Data.gov.uk र विज्ञान पो Medialab जस्तै कम्पनीहरूको पूर्व विकल्प हो। यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ र इन्टरनेटबाट डाटा स to्कलन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले Scrap प्रयोग गर्नु पर्छ र तपाईंको काम पूरा गर्नु पर्छ। यो उपकरण गैर प्रोग्रामरहरू, अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू, ठूला आकारका कम्पनीहरू, समाचार आउटलेटहरू, ट्राभल पोर्टल र निजी ब्लगका लागि पनि उपयुक्त छ। Scrap पहिलो चोटि इन्सोफिया र Mydeco द्वारा शुरू गरिएको थियो।
Dyn. लक्ष्य गतिशील वेबसाइटहरू:
सामान्य उपकरणको साथ गतिशील साइटहरू र ब्लगहरूलाई लक्षित गर्न यो सजिलो छैन। तर Scrap साथ, तपाईं सजिलै जटिल वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस उपकरणले बिभिन्न डाटा ढाँचा पहिचान गर्दछ, उपयोगी जानकारी स col्कलन गर्दछ र यसलाई कुनै समय बिना स्क्र्याप गर्दछ। तपाई एक्स्पीडिया, ट्रिपएडभाइजर र ट्राइवागो बाट डाटा निकाल्न Scrap प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यस सेवाका साथ ईबुकहरू, पीडीएफ फाईलहरू, HTML कागजातहरू, होटेल र एयरलाइन वेबसाइटहरू पनि स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा कुशलतापूर्वक scraped छ र अफलाईन प्रयोगको लागि तपाइँको हार्ड ड्राइव मा डाउनलोड छ।
Sc. Scrap उपयोग गर्न दुई अलग तरीका:
वेबसाइटहरुबाट डेटा निकाल्नका लागि दुई बिभिन्न तरिकाहरू छन्: पहिलो तरीका भनेको Scrap को एपीआईहरू प्रयोग गर्नु हो र दोस्रो तरिका वेब कागजातलाई मैन्युअल्ली क्रोल गर्नु हो। Scrap तपाईंको आवश्यकताहरू अनुसार तपाईंको डाटा प्रोसेस गर्दछ र तपाईंलाई पढ्न योग्य र स्केलेबल जानकारी प्राप्त गर्दछ। अन्य साधारण उपकरणहरू र सेवाहरूको विपरीत, Scrap पहिलो तपाईंको साइटको एपीआई पहिचान गर्दछ, यसबाट जानकारी स col्कलन गर्दछ र यसलाई वांछनीय फारममा स्क्र्याप गर्दछ।
Amazon. अमेजन र eBay बाट डाटा स collect्कलन गर्न यसको प्रयोग गर्नुहोस्:
अमेजन र eBay दुई लोकप्रिय शपिंग वेबसाइट हो। साधारण उपकरणको साथ तपाईलाई यी साइटहरूबाट जानकारी निकाल्न सम्भव छैन। तर Scrap साथ, तपाईं सजिलैसँग मूल्य निर्धारण जानकारी, उत्पादन विवरण र छविहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा तपाईले आफूले चाहेको जति पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै वेबसाइटको लागि उपयोगी नतीजाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रेपीले हाम्रो ई-कमर्स साइटहरू निर्माण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
Data. डाटा बिभिन्न ढाँचामा बचत गर्नुहोस्:
Scrap को एक सबसे विशिष्ट सुविधाहरु यो CSV, TXT र JSON स्वरूपहरु मा डाटा बचत गर्दछ। तपाईं यसलाई अफलाईन प्रयोगको लागि तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा यसलाई सिचरापी डाटाबेसमा सिधा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।